Fanodinkodinam-bola 125 miliara ariary tao amin’ny ladoany : tompon’andraikitra ambony efatra naiditra am-ponja | NewsMada
Fanodinkodinam-bola 125 miliara ariary tao amin’ny ladoany : tompon’andraikitra ambony efatra naiditra am-ponja
Par Taratra sur 02/09/2019
Nohazonina vonjimaika am-ponja ireo tompon’andraikitra ambony miisa efatra eo anivon’ny ladoany. Niakatra fampanoavana etsy amin’ny Tendrom-pitsarana (Pac) 67 ha izy ireo, ny asabotsy teo, ary izao miandry didim-pitsarana eny Antanimora izao.
Anisan’ny voarohirohy amin’izany ny tale jeneraly teo aloha an’ny ladoany, Rabenja Eric Narivony. Eo koa ny “receveur general de douane” teo aloha, tao Toamasina, Ramahefarison Tolojanahary, sy ny lehibe teo aloha an’ny sampandraharaha misahana ny ady amin’ny hosoka, Rasoamananjara Henintsoa Lovatiana, ary ny “inspecteur au service de renseingement et de l’analyse des risqué”, Razafindrakoto Lalatiana. Anisan’ny vesatra iampangana azy ireo ny fanaovana hosoka sy ny kolikoly ary koa ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, maherin’ny 125 miliara ariary. Anisan’izany ny fanaovana fanambarana hosoka amin’ny entana nohafarana sy ny tsy fandoavam-bola amin’ny fadintseranana. Na mandoa ihany, saingy ambany ny hetra sy ny haban-tseranana aloa. Ny filazana anarana orinasa maromaro nefa tsy misy akory na entana hafa ny vokarin’izany orinasa any ivelany izany… Ohatra amin’izan ny fisian’ny menaka, ny labozia (PPN) na ny kojakojan-tokantrano “électroménagers…” ao anaty kaontenera nefa anaovana fanambarana fa “papier journal” izany ka ambany ny hetra sy ny haban-tseranana aloa.
Ahina ho voarohirohy koa Rajaonah Mbola
Tsy mitovy ny taratasy “bon de livraison” any am-piaingan’ny entana sy ny taratasy “bon de livraison” handrafetana ny fanambarana atao rehefa tonga eto Madagasikara izany ka avoaka avy any amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ireo entana ireo. Misy ny firaisan-tendro ao anatin’izany mba tsy ho hitan’ny mpanara-maso koa ny lalan’ny entana amin’ny kaontenera. Eo koa ny filazana fa nifampiraharaha amin’ny orinasa mpamatsy simenitra izy ireo. Mpanamboatra menaka anefa izany orinasa izany. Eo koa ny orinasa mpamokatra ronono nefa anaovana fanambarana hosoka fa mpamatsy simenitra… Anisan’ny ahiahina ho tafiditra ao anatin’izany koa anefa ilay mpandrahara sady mpanolotsain’ny filoha teo aloha, Rajaonah Mbola.